Apple inotangisa yechitatu beta yeiyo iOS 10.3.2 yevagadziri | IPhone nhau
Nguva yeBasas yemunhu wese, tsime, kunyanya kune vanogadzira, kunyangwe kana iwe uchinge wakangwara mune iOS nyaya iwe unenge watoziva maitiro ekuyedza kuyedza kwavo nhau nenzira inokurumidza. Muchidimbu, heino isu zvatiri zvatiri, kukuzivisa iwe izvo Apple ichangobva kuvhura na19: 00 dzemasikati Spanish nguva yechitatu beta yeIOS 10.3.2, vhezheni iyo Apple yanga ichishanda nayo kubvira kubvira isati yatanga zviri pamutemo iOS 10.3.1, saka gara nesu uye tione kana iyi vhezheni ichizounza chimwe chinhu chinonakidza kumidziyo yedu neapuro, kunyange hazvo zvese zvichinongedza kugadziriswa kudiki padanho re software.
Asi ivo havauye vega, iyo Apple Watch, iyo Mac uye Apple TV vakagamuchirawo yavo inokodzera-yavo dosi inokodzera yemusunguri betas.
Uye ndezvekuti zvirokwazvo, semashura edu isu hatiwani chinhu chitsva zvachose. Uye ndizvozvo kubva kuApple inoda kuisa pfungwa pakuvandudza mashandiro eIOS uchishandisa iOS 10.3.2Nekudaro, ichi chichava chimwe chedzidziso dzekupedzisira nguva isati yasvika iOS 11, kana zvirinani isati yaunzwa kuWWDC ichaitika gore rino, senge ese apfuura. Nekudaro, iwe hapana chaunowana mune yekuvandudza noti, Apple yakanangana nekuvandudza mune yakajairwa munda kuti iOS inofamba sei neiyi yechitatu beta yeIOS 10.3.2, saka kana ikaenderera padanho irori rekuvandudzwa, hazvingaratidzike kwatiri Ichasvika kune yayo yepamutemo vhezheni pakati kana kupera kwaMay kune vese vateereri.
Mune yapfuura yepamutemo vhezheni kwakauya nhevedzano yenhau dzakakosha dzatinoziva tese, asi mune idzi beta vhezheni dzakatangwa nezuro kune vanogadzira isu hatiwane matsva ekushanda, kupfuura chero chinhu classic bug fixes uye system kugadzikana kugadzirisa. Saka, kana iwe uchida kuyedza beta, iwe unotoziva kuti iwe unogona kurodha pasi chimiro kubva pane izvi LINK uye nekuisa chimiro chevanhu betas, iyo inokurumidza nzira.
Kune zvekare mabetas ewatchOS neTVOS
Sezvamunoziva imi, iyeIyo vhezheni 3.2.2 yewatchOS yasvika kubva paruoko rweIOS 10.3.2, isu tichafanirwa kugadzirisa kubva ku iPhone neApple Watch application senge chero imwe, uye iine anopfuura 50% bhatiri. Iyi yekuvandudza zvakare haina kusanganisira chero nhau padanho re software, kupfuura optimizations. Saizvozvowo tvOS 10.2.1 yakaganhurirwa pakuvandudza mashandiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple inoburitsa iOS 10.3.2, watchOS 3.2.2 uye tvOS 10.2.1 betas
Kana kumberi kana kumashure, iyo iPhone 8 yaigona kushaya Kubata ID